यस्तो छ खान सकिने कपडा
२०७५ माघ १६ बुधबार, काठमाडौं । उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनले आफ्नो फेसन उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन् । लामो समयदेखि गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेको आफ्नो मुलुकमा तैराकी, हाइकिङ र साहसी खेलका लागि प्रयोग हुने पहिरन सार्वजनिक गरेका छन् । यी कपडाको विशेषता यसलाई आवश्यकता परेको समयमा खान पनि सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
जहाँ मरेपछि पनि गराइन्छ विवाह, लाखाैंमा बेचिन्छ शव
२०७५ माघ १५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वका दैनिक केही न केही अनौठा घटना सुन्नमा पाइन्छ । यस्तोमा संसारमा एक यस्तो स्थान पनि छ, जहाँ निकै अनौठो लाग्ने परम्परा अहिले पनि चलिरहेको छ । चीनमा एक यस्तो स्थान छ, जहाँ मृत युवतीसँग युवाहरु विवाह गर्छन् । ... बाँकी अंश»
कुन देवीदेवताको कुन वाहन ?
२०७५ माघ १५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वका हरेक स्थानमा देवी देवताको पूजा गरिन्छ । त्यसका साथै उनीहरुका वाहनहरुको पनि पूजा गरिन्छ । हिन्दू धर्ममा पूजा गरिने प्रमुख देवी देवताको वाहनहरु छन् । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियन तानाशाहले सार्वजनिक गरे खान मिल्ने कपडा
२०७५ माघ १५ मंगलबार, काठमाडौं । उत्तर कोरियाका तानाशाहले खान मिल्ने कपडा सार्वजनिक गरेका छन् । किम जोन उन आफ्नो फेसन उत्पादन लामो समयदेखि गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेको आफ्नो मुलुकमा तैराकी, हाइकिङ र साहसी खेलका लागि प्रयोग हुने पहिरन सार्वजनिक गरेका छन् । यी कपडाको विशेषता यसलाई आवश्यकता परेको समयमा खान पनि सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
२४ क्यारेट सुनबाट बनेको आइसक्रिम, खाने कि सजाउने ?
२०७५ माघ १५ मंगलबार, काठमाडौं । महिलाहरुको लागि गहना निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । विशेषगरी नेपाल तथा भारतमा गहनाहरु बनाएर सजाएर राख्ने वा लगाउने चलन अत्यधिक छ । यद्यपि अब भने आइसक्रिम पनि सुनको बन्न थालेको छ । ... बाँकी अंश»
बादलको बीचबाट चल्छ अर्जेन्टिनाको यो रेल
२०७५ माघ १४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वका धेरै रेलहरु पुल वा कुनै सुरुङबाट चल्ने गरेको समाचार धेरैले सुन्ने गरेका छन् । यद्यपि तपाइँले कहिल्यै बादलको बीचबाट चल्ने रेलबारे सुन्नुभएको छ ? ... बाँकी अंश»
जहाँ मृत महिलासँग हुन्छ पुरुषको विवाह, चिहानबाट निकालेर बेचिन्छ शव
२०७५ माघ १४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वका दैनिक केही न केही अनौठा घटना सुन्नमा पाइन्छ । यस्तोमा संसारमा एक यस्तो स्थान पनि छ, जहाँ निकै अनौठो लाग्ने परम्परा अहिले पनि चलिरहेको छ । चीनमा एक यस्तो स्थान छ, जहाँ मृत युवतीसँग युवाहरु विवाह गर्छन् । ... बाँकी अंश»
सं‌सारकै कडा सुरक्षा भएका स्थान : जहाँ पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भव छ
२०७५ माघ १४ सोमबार, काठमाडौं । विश्वको सबै स्थानमा खाजिसकेँ भन्ने भनाइ निकै चर्चित छ । यद्यपि विश्वमा अझै पनि धेरै स्थानहरु छन्, जहाँ जानु निकै कठिन छ । यहाँ विश्वका केही पुग्न निकै कठिन हुने स्थानहरु उल्लेख गरिएको छ – ... बाँकी अंश»
जहाँ हजारभन्दा बढी सैनिक बनेका थिए गोहीको शिकार
२०७५ माघ १३ आइतबार, काठमाडौं । विश्वका धेरै खतरानक स्थानहरु रहेका छन् । यसमध्येमा पनि रामरी टापुको यात्रा जो कोहीका लागि सम्भव छैन । यहाँ प्रत्येक कदममा मृत्यु सामुन्नेमा आउन पनि सक्छ । मनोरम दृश्य र साहसी कार्यले भरपूर रामरी टापुको कहानी पनि निकै खतरानक रहेको छ । ... बाँकी अंश»
यी हुन् सबैभन्दा गरीब मुलुकहरु
२०७५ माघ १३ आइतबार, काठमाडौं । विश्वका मुलुकहरु सम्पन्न वा विपन्न भन्ने कुरा प्रतिव्यक्तिको आम्दानीको हिसाबमा मापन गरिने गरिन्छ । मुलुकको कूल राष्ट्रिय आम्दानी (जीएनआई)मा समग्र जनसंख्याको हिस्सा कस्तो छ भन्ने कुराले मुलुक सम्पन्न हो वा विपन्न हो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसाबमा विश्वका सबैभन्दा गरीब मुलुकहरु यस्ता छन् – ... बाँकी अंश»
यस्तो छ विश्वको सबैभन्दा खतरनाक होटल
२०७५ माघ ११ शुक्रबार, काठमाडौं । विश्वका विभिन्न किसिमका होटलहरु छन् । धेरै होटलको बारेमा विभिन्न किसिमका समाचारहरु पनि आउने गरेको छ । यद्यपि विश्वको सबैभन्दा फरक किसिमको होटल छ जहाँ पुग्नु सबैभन्दा रोमाञ्चक हुन्छ नै तर निकै खतरानक पनि छ । ... बाँकी अंश»
अहिले पनि प्रयोगमा छन् रामायण र महाभारतका यी अस्त्रहरु
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौं । हिन्दू इतिहासका दुई ठूला महाकाव्यहरु रामायण र महाभारतका कथाहरु महायुद्धसँग जोडिएका छन् । राम–रावणको युद्ध तथा पाण्डव–कौरवको युद्धको फरक किसिमको छाप रहेको छ । यी दुई युद्ध कुनै साधारण युद्ध थिएनन् । ... बाँकी अंश»
सबैभन्दा सुन्दर १० साना मुलुक
२०७५ माघ १० बिहिबार, काठमाडौं । विश्वमा धेरै यस्ता मुलुकहरु पनि छन् जो साना तथा सुन्दर छन् । क्षेत्रफलका आधारमा निकै कम रहेका यी मुलुकहरु पर्यटकका लागि भने आकर्षक गन्तव्यका केन्द्र हुन् । करीब ८ सय वर्ग किलोमिटरजति क्षेत्रफल रहेका यी मुलुक नेपालको राजधानीको क्षेत्रफल भन्दा कम छन् । ... बाँकी अंश»
तातो तेल परेर जलेकी २२ महिनाकी बालिकाको उपचारार्थ जापानबाट सहयोग
२०७५ माघ १० बिहिबार, गुल्मी । नवलपरासीको एक बच्चाको उपचारको लागि जापानबाट आर्थिक सहयोग जुटाएर पठाइएको छ । ... बाँकी अंश»
महिलाको मासिक धर्मबारे यस्तो छ पौराणिक कथा, इन्द्रदेवलाई मानिन्छ जिम्मेवार
२०७५ माघ ९ बुधबार, काठमाडौं । महिलाको लागि रजस्वला एक नियमित प्रक्रिया हो । यो निश्चित आयुदेखि शुरु भएर निश्चित उमेरमा सकिन्छ । यस विषयमा पुराणमा पनि एक कथा छ, जुन इन्द्रदेवसँग जोडिएको छ । भागवत पुराणमा वर्णित कथाअनुसार एकपटक देवताका गुरु बृहस्पति कुनै कारणले इन्द्रदेवसँग रिसाएका थिए । यसैबीच असुरहरुले देवलोकमा आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि इन्द्रदेवले आफ्नो गद्दी छाडेर हिँड्नुपरेको थियो । ... बाँकी अंश»
जमिनमुनि सुनियो अजीवको ध्वनी, खोज्दा भेटियो शासकको स्मारक
२०७५ माघ ९ बुधबार, काठमाडौं । ग्रिसको काहिरामा इतिहासविद्हरुले ४४ सय वर्ष पुरानो स्मारक भेटाएका छन् । सो स्मारक पाँचौं फराओज साम्राज्यका कुनै ठुला शासकको हुनसक्ने बताइएको छ । सो स्‍मारक शासकलाई जमिनमा गाडेपछि त्यसमाथि बनाइएको थियो । यस्तो प्रथा मुस्लिम र इसाई धर्ममा हुन्छ । जहाँ प्राय मुस्लिम राजाहरुको ठुलो स्मारक (मकबरा) बनाइन्थ‍्यो। ... बाँकी अंश»
यसरी विना पैसा घुम्न सकिन्छ पूरा विश्व
२०७५ माघ ९ बुधबार, काठमाडौं । घुम्नु वा भ्रमणमा जानु कुनै पनि मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लामो यात्रामा जानु, नयाँ स्थानको भ्रमण जानु, नयाँ कहानी जान्नु सबैको चाहना हुन्छ । सबैलाई भ्रमणको अवसर मिल्दैन भने धेरैको भ्रमण अवसर पैसाको अभावले हुने गर्छ । यस्तोमा निःशुल्क भ्रमण धेरै मानिसका लागि भ्रमणको सबैभन्दा राम्रो मौका बन्नसक्छ । ... बाँकी अंश»
एक बोतल ह्वीस्कीको मुल्य १३ करोड रुपैयाँ !
२०७५ माघ ९ बुधबार, एजेन्सी । स्कटल्याण्डको एडिन्बरामा दुर्लभ खालको सिंगल मल्ट ह्वीस्की (जौको रक्सी) ११ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा (आजको दरभाउ अनुसार) बिक्री भएको छ। लिलामीमा राखिएको यो रक्सीको मूल्य रक्सीका लागि खर्च गरिएको विश्वकै सबभन्दा महंगो हो। ... बाँकी अंश»
दुष्कर्मका पीडित महिलाको कपडाको प्रदर्शनी
२०७५ माघ ९ बुधबार, काठमाडौं । विश्वभर विभिन्न किसिमको प्रदर्शनी हुने गरेको छ तर बेल्जियमको राजधानी सहर ब्रसेल्स सहरमा भएको अनौठो किसिमको प्रदर्शनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । ... बाँकी अंश»
यी महिलालाई अनौठो रोग, जसले सुन्दिनन् पुरुषको आवाज
२०७५ माघ ८ मंगलबार, काठमाडौं । संसारमा धेरै किसिमका अचम्मका घटनाहरु हुने गर्छन् । यस्तै एउटा घटना चीनमा घटेको छ । एक चिनियाँ महिलाले पुरुषको आवाज सुन्दिनन् । यो सुन्दा शुरुमा पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो वास्तविक हो । ... बाँकी अंश»